प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण भोली विहान ९ बजेदेखि सुरु गरिने, स्वास्थ्य परीक्षण पूरा, आवश्यक औषधि दिन सुरु – Halkhabar kura
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार २१:२७
प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण भोली विहान ९ बजेदेखि सुरु गरिने, स्वास्थ्य परीक्षण पूरा, आवश्यक औषधि दिन सुरु
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृर्गौला प्रत्यारोपण बुधबार विहान ९ बजेदेखि सुरु गरिने भएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणका त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुनभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तिम डायलाइसिस आज गरिएको छ । भोली उहाँको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएकाले आज विहान अन्तिम डाइलाइसिस गरिएको हो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा। प्रेम कृष्ण खड्गाले आज बिहान प्रधानमन्त्रीको मृगौलाको डाइलासिस गरिएको बताउदै अहिले प्रत्यारोपण अगाडि गरिने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भोली विहान ९बजेदेखि प्रत्यारोपण समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
आज बसेको उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकहरुको बैठकले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने समय निर्धारण गरेको बताइएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अगाडि रगतमा हुने टक्सिनहरू निकाल्ने काम भएको छ । भोली मृगौला प्रत्यारोपणको शल्यक्रियाको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज राति १० बजेदेखि तयारीमा राखिने छ ।
१२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौला गत भदौबाट स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सिंगापुर उपचार गराएर त्यसयता ओलीले मृगौलाको नियमित डाइलासिसमा गराउदै आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै छ भने उनलाई भान्जी नाता पर्ने समीक्षा संग्रौला ज्ञवालीले मृगौला दान गर्नुहुनेछ ।
यो पनि पढ्नुस,
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक औषधि दिन सुरु गरिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मृगौला प्रत्यारोपण तयारीका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको दोश्रो दिन सम्पूर्ण परिक्षण गरी औषधि दिन सुरु गरिएको जनाएको हो।
त्यस्तै विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरुबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेकोसमेत अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै प्रत्यारोपण अगाडि गरिने नियमित डायलासिस तथा ल्याव परिक्षणहरु गर्ने क्रम जारी रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो अवस्थामा रहेको र विशेषज्ञहरुको निरन्तर निगरानीमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौँमा हुने मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफलताको कामना गरेकी छिन्।
उनले मंगलबार अपराह्न ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेकी हुन्।
यसैगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलताको कामना गरेका छन् ।
शाहले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सफल प्रत्यारोपण तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् ।
पूर्वराजा शाहले आफ्ना पूर्व प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यलामको कामना गरेका हुन् ।
शाहको सन्देश लिएर महर्जन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज गएका थिए ।
Previous छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रदेश स्तरबाटै अभियान सञ्चारल गर्ने योजना छ: मन्त्री गुरुङ
Next अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत
निर्लज्ज अनुहार छोप्ने “लाजको टालो” हो यो ”मधेश प्रदेश” नामाकरण – जयप्रकाश गुप्ता
५ माघ २०७८, बुधबार १३:०७
नायक जयकिशन बस्नेतले प्रकाश सुबेदीको बारेमा यस्तो सम्म मुख खोले (भिडियोसहित)
७८ साल माघ ७ गते शुक्रबार जनवरी २१ तारीखको राशिफल, जय श्रीपाथीभरा माता !
७ माघ २०७८, शुक्रबार ०१:१६
६ माघ २०७८, बिहीबार २१:३६